Monday July 08, 2019 - 18:28:46 in Wararka by
Guddoomiye Mursal ayaa waxaa safarkiisa ku wehliyay, Wasiirka Gaashaandhiga, Wasiirka xannaanada Xoolaha, Wasiirka gargaarka iyo maareynta musoobooyinka, Wasiiru Dowlaha Xafiiska RW, qaar ka mid ah xildhibaannada Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Waxaa guddoomiyaha garoonka Diyaaradaha kusoo dhoweeyay mas’uuliyiin uu ka mid ahaa Madaxweynaha Maamul Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed ( Laftagreen) Wasiirro , Xildhibaanno horay ugu sugnaa Magaalada Xudur, maamulka Degmada iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagreen) ayaa ugu horeyn Gudoomiyaha Baarlamaanka ugu mahad celiyay booqashada ay ku tageen Xuddur iyo sida waddaniyadda leh ee uu wax ula qeybsanaya Shacabka ku dhaqan Koofur Galbeed.
Gudoomiyaha golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ujeeddada safarkooda ay ku tageen Xudur ku sheegay in ay Bulshada halkaasi ku dhaqan u kuur galaan xaaladaha ay ku sugan yihiin, baahiyaha jirana ay ka jawaabaan.
Wuxuu Guddoomiye Mursal, ammaan ballaaran usoo jeediyay Madaxweyne Lafta gareen iyo Wafdigii uu hoggaaminayay oo horay ugu sugnaa Xudur, wuxuuna ku tilmaamay mas’uuliyiin u heellan Shacabkooda mar walbana u taagan horumarinta degaanada Koofur Galbeed.